Onyinye Tony na-emeri ihe egwu egwu
Ihe omume ntụrụndụ na ihe omume Ịbụ abụ
Egwú ndị dị n'èzí Iwu
Ihe ngosi isii a abụghị ihe ị ga-eji na-egwuri egwu na-egwu egwu-na-egwu egwu. Onye ọ bụla na-eme ihe dị egwu nke ọdịdị mmadụ n'ime ihe dị egwu nke egwu. Abụ m kacha amasị m na-anọchite anya ndị nwere ike iji dịka ihe ndekọ ma ọ bụ ihe ọhụụ.
01 nke 06
Sweeney Todd - music na lyrics site Stephen Sondheim
Otu n'ime ihe egwu egwu kachasị amasị m oge nile, Sweeney Todd bụ akụkọ banyere onye na-ebo ebubo na-ezighị ezi nke na-abịa London maka ọbọ. Ọ na - aghọ "ọnyà mmụọ ọjọọ na n'okporo ámá okporo ámá," bụ onye na - egbu ndị mmadu ma mee ha ka ha banye n'ime mmiri. Ọ bụ ezie na o nwere ihe na-adịghị njọ, egwu dị egwu mgbe ụfọdụ.
Sweeney Todd agbawo akara asatọ Tony Awards gụnyere "Best Musical" na Drama Desk Awards gụnyere "Musical Kasị Mma" maka mmepụta Broadway mbụ ya. Ọ gara n'ihu inweta 50 nke onyinye dị egwu dị ka ihe egwu egwu. Ihe nkiri vidio ahụ merikwara iri ise na ise nke onyinye a na-achọsi ike, gụnyere Golden Globe na 2008 maka "Foto kachasị mma - Egwú ma ọ bụ Ngwá egwu."
Egwú kachasị mma: "The Best Wories in London," "Green Finch na Linnet Bird," "Ụmụ nwanyị Pretty," "Epiphany," "Nnukwu Onye Nchụàjà," "Johanna," "Ọ bụghị ezie na m gbara gburugburu."
02 nke 06
The Phantom of Opera - nke Andrew Lloyd Webber dere, nke Charles Hart dere
Akụkọ banyere The Phantom of Opera bụ otu n'ime soprano na-eto eto bụ onye aha ya bụ "phantom nke opera," nwoke na-enweghị onye na-enweghị onye ọ bụla nke na-ebi ndụ n'ụlọ ụlọ opera wee daa adaba na ya. nwa akwụkwọ ya. The phantom nwere ike ịdọrọ ụfọdụ aghụghọ aghụghọ na ndị na-atụ ụjọ na ndị òtù na-enye ya echebe ohere ohere na- abụ abụ na ogbo , nke n'ụzọ na-eduga ya ezigbo ịhụnanya ya.
The Phantom of Opera wee merie ọtụtụ onyinye, gụnyere Laurence Olivier Awards maka "Best New Musical" na 1986 na "Ihe Kasị Mma Gosi" na 2002 maka mmepụta mbụ nke London. Mgbasa ozi Broadway mbụ ahụ meriri ngụkọta nke Tony Tony na asaa Drama Desk Awards.
Egwuru egwu kachasị mma: "Chee M," "Angel of Music," "The Phantom of the Opera," "Music of the Night," "Ihe M Na-arịọ Gị," "Masquerade," "Ịchọrọ na Ị Dị n'Ebe A Ọzọ , "" Ihe Ntughachi nke Nlaghachi. "
03 nke 06
N'ime Ohia - music na lyrics site na Stephen Sondheim
N'ime Osisi na- ejikọta ọtụtụ akụkọ na ihe odide sitere na akụkọ Nwanna Grimm. Egwú ahụ na-enye ihe niile ederede dị omimi, na-eji akụkọ mbụ, ma na-emepụta ihe ọhụrụ na nke na-atọ ụtọ.
N'ime oke osisi ka a choputara ihe kariri iri mmadu iri mmadu iri ise. Ihe kachasị dị nso bụ onyinye Laurence Olivier maka "Mgbochi Ngwá Agha kacha mma" na 2010 maka mmepụta ya n'otu afọ na London.
Egwuregwu Na-atọ Ụtọ: "Na-eme Otu Okwu," "Ekele, Nwa Nwata," "Aghọtara m na nke a bụ Goodbye," "M Maara Ihe Ugbu A," "Agony," "Ọ Na-ewe Mmadụ Abụọ," " Woods, "" Ọ dịghị Onye Naanị Ya. "
04 nke 06
Oliver! - egwu na egwu site Lionel Bart
Ndị na-enweghị nne na nna na-egbu onwe ha, mpụ na n'okporo ámá, mmegbu, igbu ọchụ, na izu ohi. Nke a abụghị nkwekọrịta Disney na-atọ ọchị na-enwe obi ụtọ, ma akụkọ akụkọ gbara ọkpụrụkpụ dabeere na akwụkwọ akụkọ Charles Dickens, "Oliver Twist." Music dị egwu ma akụkọ ahụ ga-agwụsị olileanya.
N'ime ọtụtụ onyinye Oliver! meriri, Tony Award for "Best Best Score" bụ ihe a ma ama. Egwuregwu ihe nkiri ahụ nwetara akwụkwọ ise Academy Awards na abụọ Golden Globes, nke gụnyere "Foto kachasị mma," "ụda kasị mma," na "Foto kachasị mma - Egwú ma ọ bụ ọgwụ."
Ihe a na-ahọrọ mmasị: "Food, Food Glory," "Oliver!" "Ebee Ka Ịhụnanya Dị?" "Tụlee Onwe Gị," "I Kwesịrị Were Onyinye ma ọ bụ Abụọ," "M Ga-eme Ihe," "Oom-Pah -Pah, "" Ruo Ogoro O Chọrọ M. "
05 nke 06
Pippin - music na lyrics site Stephen Schwartz
Otu egwu egwu nke ndi mmadu na-enwe mmetụta uche nke Cirque du Soleil, akụkọ a na-agbaso isi ihe, Pippin, n'achochọ ihe ndụ pụtara. Mgbe ọ na-achụso ya, ọ na-ebute ọchịchịrị ya.
Pippin meriri asatọ Tony Awards naanị. Mgbasa Broadway na 2013 meriri iri onyinye iri na ise na Tony Awards maka "Ntanta kachasị mma," "Best Choreography," na "Ejiji Ejiji Egwuregwu Kasị Mma."
Abụ E Ji Eke Eke: "Ime Anwansi," "Nkuku nke Eluigwe," "Ịhụnanya Ịhụnanya," "Achọrọ m na m ga-ahapụ nwoke ahụ."
06 nke 06
Candide - music site n'aka Leonard Bernstein, site n'aka Richard Wilbur
Egwú bụ Candide na-enwe mmetụta dị ukwuu na ihe ịga nke ọma. Ha abụọ na-agbaso akụkọ nke ndị na-amaghị ihe na-aghọta ụwa nwere ike bụrụ ihe ọjọọ. A pụrụ ile Candide anya dịka onye na-eme ihe nkiri, nke bụ ihe dị n'etiti - n'etiti egwú na opera, mana isiokwu ya na-eme ka ọ bụrụ nke ọma na ndepụta a.
A choputara Candide maka ise Tony Tony na 1957 maka mmeputa ohuru Broadway, ma My Fair Lady wezugara ha nile. N'agbanyeghi mpi egwuregwu siri ike, o mechara nweta akara Tony Tony, Drama Desk Awards, na Laurence Olivier Awards.
Egwurugwu Na-atọ Ụtọ: "Obi Ụtọ, Obi Ụtọ Anyị," "Ọ ghaghị ịbụ," "Glitter and Be Gay," "The Ballad of Eldorado," "What's the Use?" "Venice Gavotte," "Mee Ka Ubi Anyị Na-eto."
Esi wepuo nkwekorita olu
Soprano Fächer: Olee Ụdị Ngwá Ọrụ Ịbụ Aha?
Egwú egwu dị egwu maka abụ ndị inyom Lower Female
Ndị na-agụ egwú na-agba ume ka ha na-abụ abụ n'iji edekọ ihe
Kedu Mgbe Otu Onye Na-egwu egwu nke Na-eme Aspuru Ga-eme?
Omume ume maka mmalite nke ndị ọbụ abụ
Kedu ihe bụ abụ abụ kwesịrị ekwesị?
3 Hilarious Broadway Songs for Lower Voices Voices
Kedu ihe ndekọ Regcal?
Atụmatụ maka otu esi egwu abụ
Otu esi etinye ebe gi na ntinye olu
Ihe eji enyere gi aka maka mmiri mmiri
Agha Ụwa M: Sergeant Alvin C. York
Teen Online dịwara saịtị
Ụgha nke Betlehem na Mmekọahụ nke ọmụmụ Jizọs
Eagle nke Haast (Harpagornis)
Ndi umuaka kachasi oke nke '80s Rock
Mealogue nke Medea na Euripides
Pre-Pottery Neolithic - Ọrụ ugbo na iri nri n'ihu poteto
Torralba na Ambrona
Ihe ndị dị na Zero Relative
Otu esi achọta nzuko
Ndị na-agba mgba na
Aha Ụmụaka nke Chinese maka Ụmụaka
Na-ekwu okwu n'asụsụ dị iche iche
Kelly Clarkson Biography na Profaịlụ
Chicago na-eme mkpọsa akụkọ
Ụkpụrụ Omume na Omume Ajụjụ: Ịzụlite na Ịzụlite
Gịnị bụ ogologo oge March?
Nke kachasi ike ịkọ (ma sụgharịa) Ụmụ anụmanụ na-eburu
Okpukpo a na-esite na ya na-agba New York
Nkọwa na Ihe Nlereanya nke Ụgha Eziokwu
1996 Nna-ukwu: Ndagwurugwu Norman na-agbanye na uwe ugbo Faldo
'80s Rock Music Genres - A Capsule View
Egwuregwu Abụọ kachasị mma nke Contemporary Rock
Mba na Ogologo Oge Ogologo
Akụkọ na usoro iheomume nke ugbo '20s
© 2022 ig.eferrit.com